Yakha Ukwethembana Ngokuthi CHA! | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 13, i-2010 Douglas Karr
Ugcine nini ukuhlala ngaphesheya komthengisi wase ethi, “Uxolo, mhlawumbe ngeke sikwazi ukuhlangabezana naleyo ntengo noma / noma lokho okulindelwe“. Angikaze, noma.
Namuhla kusihlwa ngisukile kunkontileka ebengingayenza ngivale amehlo. Kodwa-ke, ngiyazi ukuthi ubulula besivumelwano bungaguqukela buvule ikani elikhulu lezikelemu. Ngangisetha futhi ngifakele othile ibhulogi bese kuthi, ngokuzenzakalela, ngibe ukusekelwa kwebhulogi yabo, ukusekelwa kwabo yi-IT nokusekelwa kwabo kokusingathwa. Angiqageli - ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho. Kungakho ngincamela ukubhekisa amathemba kuSoftware njengomthengisi Wensizakalo onjengaye Ukuhlanganiswa. (Ukudalulwa: Ngingumninimasheya)
Amaklayenti engisiza ngawo ukubhuloga akuyona inkontileka yesikhathi esisodwa, sinobudlelwano obuqhubekayo ukumboza izingqinamba ezishiwoyo. Ngijabule ukubasiza nganoma yiziphi izidingo zabo ngoba kulindelwe lezo zinsizakusebenza. Bekungenjalo kulobubusuku… ngimane ngasuka esicelweni ngoba bekuvele kungu- project ukucaphuna. Ayikho into efana neprojekthi yewebhu ephela… ngaphandle kokuthi inkampani ingene ngaphansi. Kusuka kokuqukethwe, ukuklanywa, ukuhlelwa, ukuhlanganiswa… yonke iphrojekthi yewebhu iguquka njengoba izidingo zishintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ukubhloga nakho, nakho. Futhi isoftware njengensizakalo (SaaS) eqinile yenzelwe ukusingatha izingqinamba eziqhubekayo nokusekelwa. Angiyona.
Emuva ephuzwini lami… mhlawumbe uma izinkampani eziningi zenqaba izabelomali ezingenangqondo, izikhathi ezibekiwe, nokulindelwa okungenangqondo amanye amabhizinisi athembekile angakha ukwethembana ngamathemba ethu. Inkinga abantu abaningi laphaya, ikakhulukazi kwezokumaketha oku-inthanethi nakwisizinda semithombo yezokuxhumana, bayesaba ukusuka kude nezimali ezimbalwa.
Abathengisi abaningi bakhetha ukukhokha izikweletu zabo ngokulimaza iklayenti kunokuba bakhokhise ngokwanele ukufeza izethembiso zabo. Kuyishwa ngoba ubisi olulandelayo olubi lokungena emnyango luhlaselwa ngokushesha kufana nokuthi bayisela lesi-2-bit lapho ukuze badlwengule, baphange futhi bathulule isikhwama semali.
Uma ungeke ukwazi ukuqedela iphrojekthi ngesikhathi, yenza izethembiso zakho noma wenze imali encane ngokwenza lo msebenzi, kungani ungathengisa? Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bekufanele ngihlukane nomngani wami omkhulu nefemu yabo ngoba amaphrojekthi ethu abengasebenzi. Bengingahlangabezani nezilindelo zabo… futhi ngincamela ukugcina ubungane bese ngilahlekelwa yimali kunokuhluleka okuqondile. Futhi besizokwehluleka ngokumangazayo kuphrojekthi engihambele kude nayo… ngiyayazi.
Ngingayisebenzisa imali? Kunjalo! Amaphrojekthi amancane anjengalawo angukungena okukhulu kwemali ebhizinisini futhi angasithwala ekutholakaleni kwezinkontileka ezinkulu ezizayo nezizayo. Angikwazi ukukwenza, noma kunjalo. Uma ngibheka emuva, ngifisa sengathi ngabe ngahamba kude nezinkontileka eziningi ezincane selokhu ngaqala ibhizinisi lami.
Okuxakayo ngukuthi lawa makhasimende afanayo afika kimi emgwaqeni kumaphrojekthi amakhulu kakhulu anokuhanjiswa okuqinile, isinxephezelo esihle kanye nezikhathi eziguquguqukayo. Ngaso sonke isikhathi lapho ngithi “Cha” manje, ngiyazi ukuthi ngakha ukwethembana nethuba lokuthola ithuba elingcono phansi komgwaqo. Nawe kufanele.
I-Old Spice Ikhuthaza: Uma Ungabaza, Yiya Esimungwini
Jul 16, 2010 ngo-3: 56 PM
Empeleni siqhuba isethulo sonke sizungeze i- "The Power of No." Funda kabanzi ngokubaluleka kokwenqaba umsebenzi ku-athikili ka-Ashley Lee wethu, Lowo Akuwona Umsebenzi Wami!